मिली ५३ ~ मत्ती, Marcus, लूका, जन, प्रेरित, रोमी, १ कोरिन्थी, २ कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, १ थिस्सलोनिकी, २ थिस्सलोनिकी, १ तिमोथी, २ तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स, १ पत्रुस, २ पत्रुस, १ यूहन्ना, २ यूहन्ना, ३ यूहन्ना, यहूदा, प्रकाश
येशू ख्रीष्‍टको जन्‍म यस प्रकारले भयो: उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्‍माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो।
फरिसीहरू उहाँकहाँ आएर उहाँलाई जाँच गर्न भनी उहाँलाई सोधे, “के कसैले कुनै कारण पत्नीसँग विवाहविच्‍छेद गर्न उचित छ?”
तिनीहरूले उहाँलाई भने, “मोशाले किन विवाहविच्‍छेदको त्‍यागपत्र दिएर पत्‍नीलाई त्‍याग्‍ने आज्ञा दिए?”
चेलाहरूले उहाँलाई भने, “पति-पत्नीको यस्‍तै सम्‍बन्‍ध हो भनेता, विवाह नगर्नु नै असल हुनेछ।”
“स्‍वर्गको राज्‍यलाई एक जना राजासँग तुलना गर्न सकिन्‍छ, जसले आफ्‍नो छोराको विवाह-भोज तयार गरे,
“फेरि तिनले अरू नोकरहरूलाई यसो भनेर पठाए, “निमन्‍त्रित व्‍यक्तिहरूलाई भन, हेर, मैले मेरो भोज तयार गरेको छु, मेरा गोरुहरू र मोटा-मोटा पशुहरू मारिएका छन्, र सब चीजहरू तयार छन्‌। विवाह-भोजमा आउनुहोस्‌।’
“तब तिनले आफ्‍ना नोकरहरूलाई भने, ‘विवाह-भोज तयार छ, तर निम्‍त्‍याइएकाहरू योग्‍य भएनन्‌।
यसकारण तिमीहरू सड़कहरूमा जाओ, र जतिलाई भेट्टाउँछौ तिनीहरूलाई विवाह-भोजमा निम्‍तो देओ।’
तब ती नोकरहरूले सड़कहरूमा गएर भेट्टाएका सबैलाई, दुष्‍ट र असल दुवैलाई, जम्‍मा गरे, र विवाह-घर पाहुनाहरूले भरियो।
“तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भनी भित्र आए, तब तिनले विवाहको पोशाक नलगाएको एक जना मानिसलाई देखे।
तिनले त्‍यसलाई सोधे, ‘मित्र, विवाहको पोशाक नपहिरी तपाईं कसरी यहाँ भित्र आउनुभयो?’ त्‍यो निरुत्तर भयो।
“गुरुज्‍यू, मोशाले भनेका छन्, कोही मानिस निस्‍सन्‍तान मर्‍यो भने उसको भाइचाहिँले दाजुकी पत्‍नीलाई विवाह गरेर दाजुको सन्‍तान खड़ा गर्नुपर्छ।
हाम्रा बीचमा सात दाजुभाइ थिए। जेठोले विवाह गरेपछि ऊ मर्‍यो, र सन्‍तान नभएकोले उसको भाइको निम्‍ति पत्नी छोड़ेर गयो।
किनकि मृतकहरूको पुनरुत्‍थानमा मानिसहरूले विवाह गर्दैनन्, न विवाह गरिदिन्‍छन्, तर तिनीहरू स्‍वर्गका स्‍वर्गदूतहरूजस्‍ता हुन्‍छन्‌।
किनकि जसरी जलप्रलयभन्‍दा अगाडि नोआ जहाजभित्र पस्‍ने दिनसम्‍म, मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए,
“तिनीहरू किन्‍न जाँदा दुलहा आइपुगे, र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे, र ढोका बन्‍द भयो।
आशेरको कुलमा फनुएलकी छोरी हन्‍ना नाउँकी एउटी वृद्ध अगमवादिनी थिइन्, जो कुमारी अवस्‍थामा विवाह गरेर सातै वर्ष मात्र श्रीमान्‌सँग बसेकी थिइन्‌।
तिमीहरू ती मानिसहरू जस्‍ता होओ, जसले आफ्‍ना मालिक विवाहको भोजबाट फर्किआएर ढकढक्‍याउँदा तिनको निम्‍ति झट्टै ढोका खोलिदिन्‍छन्‌।
“विवाहको भोजमा तिमीले कसैको निम्‍तो पायौ भने आदरका स्‍थानमा नबस। तिमीभन्‍दा बढ़ी प्रतिष्‍ठित व्‍यक्तिले त्‍यहाँ निम्‍तो पाएका होलान्‌।
“अर्कोले भन्‍यो, ‘मैले विवाह गरेको छु। यसकारण म आउन सक्‍दिनँ।’
“जसले आफ्‍नी पत्नीलाई त्‍यागेर अर्कीलाई विवाह गर्छ, त्‍यसले व्‍यभिचार गर्दछ, र श्रीमान्‌बाट त्‍यागिएकी स्‍त्रीलाई विवाह गर्ने मानिसले पनि व्‍यभिचार गर्दछ।
नोआ जहाजभित्र प्रवेश नहोउञ्‍जेल मानिसहरू खाँदैथिए, पिउँदैथिए, विवाहबारी गर्दैथिए। र जलप्रलय आयो, र सबैलाई नष्‍ट पार्‍यो।
“गुरुज्‍यू, मोशाले हामीलाई लेखिदिएका थिए, कि कुनै मानिसको विवाहित दाजु निस्सन्‍तान मर्‍यो भने, भाइचाहिँले त्‍यसकी पत्‍नीलाई विवाह गरी दाज्‍यूको सन्‍तान खड़ा गरिदिनुपर्छ।
र साहिँलोले त्‍यसलाई विवाह गरे र त्‍यसै गरी ती सातै जना निस्सन्‍तान मरे।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “यस युगका मानिसहरू विवाह गर्छन्, र विवाह गरिदिन्‍छन्‌।
तर त्‍यस युगसम्‍म पुग्‍न योग्‍य ठहरिनेहरूले, र मृतकबाट जीवित भई उठ्‌न योग्‍य हुनेहरूले न विवाह गर्छन्, न विवाह गरिदिन्‍छन्‌।
तेस्रो दिन गालीलको काना नगरमा एउटा विवाह थियो। येशूकी आमा त्‍यहाँ थिइन्‌।
येशू र उहाँका चेलाहरू पनि विवाहमा निम्‍त्‍याइएका थिए।
अगमवाणी बोल्‍ने तिनका चार जना अविवाहित छोरीहरू थिए।
उदाहरणको लागि, एउटी विवाहिता स्‍त्री तिनको पति बाँचुञ्‍जेल आफ्‍नो पतिसँग कानूनले बाँधिएकी हुन्‍छिन्, तर यदि तिनको पति मर्‍यो भने पति सम्‍बन्‍धको कानूनबाट तिनी मुक्त हुन्‍छे।
यसै गरी पति जीवित छँदै तिनी अर्को पुरुषसँग बस्‍न गई भने तिनी व्‍यभिचारिणी कहलाइन्‍छिन्‌। तर पति मर्‍यो भने तिनी त्‍यस कानूनबाट मुक्त हुन्‍छिन्, र अर्को पुरुषसँग विवाह गरी भने पनि तिनी व्‍यभिचारिणी हुँदिनन्‌।
१ कोरिन्थी ७:८
तर अविवाहित र विधवाहरूलाई म भन्‍दछु, तिनीहरू मजस्‍तै अविवाहित रहे तिनीहरूका निम्‍ति असल हुनेछ।
१ कोरिन्थी ७:९
तर तिनीहरूले आफूलाई वशमा राख्‍न सक्‍दैनन्‌ भने तिनीहरूले विवाह गरून्‌। किनभने कामवासनामा जल्‍नुभन्‍दा विवाह गर्नु असल हो।
१ कोरिन्थी ७:१०
अब विवाहितहरूलाई म कड़ा आज्ञा दिन्‍छु (मेरो आज्ञा होइन, तर प्रभुको आज्ञा हो): पत्‍नी पतिबाट नछुटोस्‌।
१ कोरिन्थी ७:११
तर छुट्टिएर बसिहाले तापनि त्‍यसले विवाह नगरोस्, बरु आफ्‍नो पतिसँग मिलाप गरोस्‌। पतिले आफ्‍नी पत्‍नीलाई नत्‍यागोस्‌।
१ कोरिन्थी ७:२७
के तिमीले विवाह गरेका छौ? त्‍यसो भए आफ्‍नी पत्‍नीबाट छुट्‌न नखोज। के तिमी अविवाहित छौ? त्‍यसो भए विवाह गर्न नखोज।
१ कोरिन्थी ७:२८
तर तिमीले विवाह गर्‍यौ भने पनि त्‍यो पाप होइन। कन्‍याकेटीले विवाह गर्दैमा त्‍यसले पाप गरेकी हुँदिन। तरै पनि विवाह गर्नेहरूले यस जीवनमा कष्‍टहरूको सामना गर्नुपर्नेछ, र म तिमीलाई यसदेखि जोगाउन चाहन्‍छु।
१ कोरिन्थी ७:३२
तिमीहरू सबै निष्‍फिक्री होओ भन्‍ने म चाहन्‍छु। विवाह नभएको मानिसले प्रभुलाई कसरी खुशी तुल्‍याऊँ भनेर प्रभुकै कुराको विषयमा फिक्री गर्दछ,
१ कोरिन्थी ७:३३
तर विवाह भएको मानिसले पत्‍नीलाई कसरी खुशी राखूँ भनेर संसारका कुराको फिक्री गर्दछ।
१ कोरिन्थी ७:३४
यस्‍तो मानिसको मन दुईपट्टि लागेको हुन्‍छ। विवाह नभएकी स्‍त्रीले शरीर र आत्‍मा दुवैमा कसरी पवित्र रहूँ भनेर प्रभुकै कुराका विषयमा फिक्री गर्दछे। तर विवाह भएकीले चाहिँ कसरी आफ्‍ना पतिलाई खुशी राखूँ भनी संसारका कुराको फिक्री गर्दछे।
१ कोरिन्थी ७:३६
यदि कुनै मानिसले आफूसँग मगनी भइसकेकी कन्‍यासँग अनुचित व्‍यवहार गरेको ठान्‍छ, र यदि त्‍यस कन्‍याको उमेर पनि ढल्‍कँदैगएको छ भने, उसले विवाह गर्न चाहे विवाह गर्न सक्‍छ। यसमा पाप छैन। तिनीहरूको विवाह हुनैपर्छ।
१ कोरिन्थी ७:३७
तर जुन मानिसले आफ्‍नो मन पक्‍का गरिसकेको छ, जो कुनै करकापमा परेको छैन, तर आफ्‍नो इच्‍छालाई वशमा राख्‍न सक्‍छ, र जसले कन्‍यालाई विवाह नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ, भने— यस्‍तो मानिसले पनि ठीकै गर्दछ।
१ कोरिन्थी ७:३८
यसरी जसले कन्‍यालाई विवाह गर्छ, उसले ठीकै गर्छ, तर जसले विवाह गर्दैन, उसले अझ असल गर्छ।
१ कोरिन्थी ७:३९
पति बाँचुञ्‍जेल पतिकै बन्‍धनमा पत्‍नी रहन्‍छे। तर पतिको मृत्‍यु भएपछि त्‍यसले इच्‍छा गरेको व्‍यक्तिसँग त्‍यो विवाह गर्न स्‍वतन्‍त्र हुन्‍छे, तर ऊचाहिँ प्रभुकै जन हुनुपर्छ।
१ तिमोथी ४:३
तिनीहरू विवाह निषेध गर्छन्‌। विश्‍वास गर्नेहरू र सत्‍य जान्‍नेहरूले धन्‍यवादसाथ ग्रहण गर्नुपर्ने परमेश्‍वरले सृजनुभएका भोजनहरूबाट अलग्‍ग बस्‍ने आदेश दिन्‍छन्‌।
१ तिमोथी ५:९
साठी वर्षदेखि माथिकी विधवा, जसको एक चोटि मात्र विवाह भएको थियो, तिनलाई मात्र विधवा-सूचीमा राख।
१ तिमोथी ५:११
तर कम उमेरका विधवाहरूको नाउँचाहिँ विधवा-सूचीमा नलेख, किनकि जब तिनीहरूको काम-वासनाले तिनीहरूलाई ख्रीष्‍टबाट टाढ़ा लान्‍छ, तब तिनीहरूले विवाह गर्ने इच्‍छा गर्छन्‌।
१ तिमोथी ५:१४
यसकारण कम उमेरका विधवाहरूले विवाह गरून्, छोरा-छोरीहरू पाऊन्, घरबार सम्हालून्, र विरोधीलाई हाम्रो बदनाम गर्ने मौका नदेऊन्‌ भन्‍ने म चाहन्‍छु,
हामी रमाऔं र अत्‍यन्‍त खुशी होऔं, र उहाँलाई महिमा दिऔं! किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ, र उहाँकी दुलही स्‍वयम्‌ तयार भएकी छिन्‌।
अनि ती स्‍वर्गदूतले मलाई भने, “यो लेख, थुमाका विवाहको भोजमा निमन्‍त्रणा पाउनेहरू धन्‍यका हुन्‌।” तिनले फेरि मलाई भने, “परमेश्‍वरका सत्‍य वचनहरू यी नै हुन्‌।”